Fanka & Madaddaalada - Sabahionline.com
Fanka & Madaddaalada
Khaligraph Jones oo ka faallooday farriintiisa iyo korriinadiisii Kayole
2014-04-18 Heesaaga Kenyaanka ah ee Khaligraph Jones, oo bilaabay in uu heesaha qoro markii uu dugisga hoose dhiganayay, ayaa sheegaya in uu rabo in uu tusaale lagu dayan karo u noqdo dhalinyarada laga yaabo in ay dambiyada iyo waxyaabaha kale ee akhlaaq xumadaha ah sameeyaan.
Hiba Nuura oo ku niyadsan mustaqbalka Soomaaliya
2013-10-04 Heesaaga isla markaana ah mu'allifka, ee markii ugu horreeysay ku soo laabatay Muqdisho tan iyo 1990-kii, ayaa markii ugu horreeysay dadka la qaybsatay dareenkeeda waxayna ku dhiirri-galisay Soomaalida gudaha iyo dibaddaba in ay gacan ka gaystaan dib u dhiska.
2013-08-05 Pascal Chuma, oo dhowaan ka soo noqday carwo ka dhacday New York, ayaa u sheegaya Sabahi jacalyka uu u qabo farshaxanka iyo sida xirfadlayaasha Kenyaanka ah ay farshaxanka shaqo uga dhigan karaan.
2013-05-27 Isaga oo adeegsanaya maansadiisa, ayaa Muki garang u isticmaalaa muusiga si uu kor ugu qaado caddaaladda bulshada awoodna u siiyo jiilka dhallinta yar.
Fannaanad Falis Cabdi Maxamed: Qof walba oo Soomaali ah mas'uuliyad ayaa ka saaran dib-u-dhiska Soomaaliya
2013-04-24 Fannaanadda Waayaha Cusub waxa ay dumarka Soomaaliyeed iyo dhallinyarada ku dhiirri-galisay in ay dowr muuqda ka qaataan horumarinta nabadda si mustaqbal fiican loo helo.
Bandhigga 'Hirgali Hammigaaga Faneed' oo ka billowday Muqdisho
2013-04-01 Tartan telefishinka laga sii daynayo ayaa dhallinta Soomaaliyeed u oggolaanaya in ay u tartamaan abaal gudyo heesaha, wax curinta iyo bandhig faneedyo kale ah.
Daniel Ndambuki: Kala duwanaanshaha dhaqanka Kenya waa quwaddeena
2013-03-19 Churchill Live, oo ka mid ah barnaamijyada majaajilooyinka oo Kenya loogu jecel yahay, ayaa ka hadla arrimaha waddanka asaasiga u ah wuxuuna siiyaa majaajileystayaasha soo baxaya masrax ay hawshooda ku soo bandhigaan.
King Majuto: Majaajilooyinkaygu waxay gacan ka geystaan midaynta Tansaaniya
2013-03-14 Majaajilaystuhu wuxuu sheegay in shaqadiisa jilitaanka ah ay gacan ka geysatay ku faafinta Tansaaniya farriinta isku-dulqaadashada ayna door muhiim ah ka qaadatey horumarinta midnimada u dhexeysa Afrikanka.
Waayaha Cusub oo bandhig-faneed nabadeed ka dhigaya Muqdisho
2013-03-08 Kooxdan fannaaniinta ah ee saldhigoodu yahay Nairobi ayaa riwaayad ka dhigaya Muqdisho si ay Soomaalida ugu dhiirri-galiso in ay diidaan colaadda kuna kaalmaynaya in ay wadankooda dib u dhisaan.
Riwaayad curiyayaasha, fanaaniinta oo dareemaya natiijo xun oo ka timid baaba'a masraxa Kenya
2013-01-08 Taageerayaasha masraxa ayaa sheegaya in fanku uu noqon karo shay muhiim ah oo waxbari kara dhalinyarada si ay u noqdaan muwaadiniin xumaanta iyo wananaga kala saari kara, taas oo hababka kale ee madadaaladu aysan samayn karin.
Farshaxanka oo Muqdisho dib ugu soo laabanaya xilli uu amaankuna soo hagaaggayo
2013-01-01 Hagaagga amnaanka iyo saaridii al-Shabaab ayaa u dhaqaaqaaii farshaxan u oggallaaday in uu kusoo noqdo magaalada caasimadda ah.
Fannaaniinta Kenya oo doorbiday teknoolojiyada si ay uga hor tagaan burcadnimada
2012-12-14 Fannaaniinta oo leh Guddiga Xuquuqda Lahaanshaha Kenya wax badan kama qabanayo inuu muusiggooda ka ilaaliyo xad-gudubka xuquuqda lahaanshaha.
Saxaafadda Raadiyaha iyo tan elektorooniga ah ayaa meesha ka saaray wargaysyada Soomaaliya
2012-12-11 Dhakhsaha iyo lacag la'aanta raadiyuhu leeyahay ayaa sababay in inta badan wargaysyadii ka soo bixi jirtay waddanka ay shaqadii joojiyaan.
Damaashaadka muusikada Malindi oo gacan ka gaystay nabad, wada noolaansho
2012-12-03 Caruurta oo la baro qiimaha nabadda marka ay da'da yar yihiin waxay u saamaxaysaa in ay yeeshaan xirfad ay bulshadooda kaga dhex noqdaan danjireyaal nabadeed, qaban-qaabiyayaal iyo ka qeyb galayaal ayaa yidhi.
2012-11-30 Waraysi uu siiyay Sabahi, ayuu Axmed Saleebaan Bidde ku soo dhoweeyay dib u furista masraxyada Muqdisho iyo Hargaysa, laakiin wuxuu sheegay in fannaaniinta Soomaaliyeed ay u halgamayaan dib u helidda doorkoodii.
Raadiyaha Ghetto ee Nairobi oo gaadhaya dan yarta iyo kuwa la dayacay
2012-10-26 Iyaga oo la shaqaalaysiiyay xidhiidhiyayaal aan la aqoonin, ayaa Raadiyaha Ghetto wuxuu ka shaqaynayaa in uu kor u qaado dadka Nairobi ee dulman kobciyana wacyi galinta arimaha bulshada iyo ka dheeraanshaha maan dooriyayaasha iyo fasaadka kale.
Filim Kenyaan ah oo u tartamaya magacaabidda bilada Akademiga
2012-10-18 'Nairobi Half Life' ayaa diiwan galinaya nolosha dhalinyarada Kenya ee ka soo hijroota tuulooyinka baadiyaha imaanayana magaalooyinka iyaga oo nolol fiican rajaynaya, laakiinse ku danbeeya inay ku noolaadaan nolol dambiilenimo ah.
Fanaaniinta Kenya oo qabanaya riwaayado xaga nabadda ah iyada oo ay soo dhawdahay doorashooyinkii 2013
2012-09-28 Iyada oo Kenya ay isku diyaarinayso doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Maarso ee sanadka soo socda, ayaa dadka caanka ah iyo fanaaniinta ay isu tagayaan si ay kor ugu qaadaan hab u socod siyaasadeed oo nabad ah.
Guddi urur cusub oo ka mas'uul ah ciyaaraha kubadda cagta ee Tansaaniya
2012-09-18 Guddi urureedkan cusub ayaa ka qaadaya Isutaga Kubadda Cagta ee Tansaaniya shaqadoodii ahayd in ay maamulaan Vodacom Premier Leage.
Kaydka raadiyaha Soomaliya oo ka badbaaday tobanaan sano oo boob iyo colaad ah
2012-09-14 Gaashaanle Sare Abshir Xaashi ayaa si hagar la'aan ah u shaqaynayay si uu u ilaaliyo kaydka qaranka tan iyo 1991-dii.
2012-08-31 Gabayaagan ayaa qaba in weedha lagu hadlo ay dhalainyarada u saamaxayaan in ay ka doodaan arimo muhiim ah oo nolosha bulshada saamaynaya sida saboolnimada, musuqmaasuqa, dawlad wanaaga iyo HIV/AIDS.
2012-08-09 Soomaalida ka xoraywday gacanta al-Shabaab ayaa hadda si aan cabsi lahayn ra'yigooda u dhiiban kara, laakiinse dhinac u janjeerka iyo warinta u jeedooyin ka danbeeyaan ayaa khatar galinaysa waraabhinta wadanka.
Dadka Muqdisho oo soo nooleeynaya caado dhaqamadkii hore kadib eryiddii al-Shabaab
2012-08-08 Fanaaniinta ayaa leh in dhaqanka uu qeybo muhim ah ka yahay xaddaaradda Soomaalida ee ay al-Shabaab cadaadisay.
2012-07-20 Koox fanaaniin dhalinyaro Soomaali-Keenyaan ah ayaa isku dayaya in ay ka qeyb qaataan nabadda, ayna la dagaalamaan sumadaynta xun ee lagu xagliyo sinjiga Soomaalida, iyagoo adeegsanaya bandhig faneed.
Bandhigga buugaagta Hargaysa oo diiradda saaraya mustaaqbalka
2012-07-18 Bandhigga buugaagta ayaa looga gol-leeyahay in lagula dagaalamo jahliga, lagu faafiyo wacyi-galinta dhaqanka iyo in la abuuro bulsho wax qori-akhrin karta.
Grandmaster Masese :Dhaqanka waxa uu dawr ka qaadan karaa is dhax-galka gobalka.
2012-07-09 Fanaan Kenyaan ah ayaa leh haddii shacabka Bariga Afrika mid walba kan kale dhaqankiisa fahmi lahaa in is dhax-galka gobalku sahlanaan lahaa.
Qaban-qaabiyayaasha ayaa sheegay in tartanka Miss Tansaaniya uu dhiira-galiyay maal-gashiga iyo dalxiiska
2012-06-29 Hashim Lundenga, oo ah qaban-qaabiyaha tartanka qurxda ee Miss Tansaaniya, ayaa sheegay in bandhiggu uu Tansaaniya ka caawiyay in ay fuusho masraxa caalamka.
2012-05-30 Fannaaniinta Soomaaliyeed ayaa dalka si koox koox ah ugu soo laabanaya si ay dib ugu soo nooleeyaan dhaqankii iyo muusigii soo jireenka ahaa ee baaba'ay mudadii dagaalka.
Tansaaniya oo la murugaysan geerida jilaagoodii ay jeclaayeen
2012-04-12 Saraakiil ayaa sheegaya in Steven Charles Kanumba uu is-gaarsiiyay maqaam gaar ah sababtoo ah waxa uu ka shaqeeyay in uu Tansaaniya iyo aflaamteedaba ka gudbiyo xudduudaha.
2012-03-19 Waraysi gaar ah oo uu siiyay Sabahi, ayuu Shiine Akhyaar uga hadlay kalgacalka uu u hayo muusigga iyo qorshihiisa uu kula dagaallamayo argagixisanimada iyo xag-jirnimada isaga oo isticmaalaya heesaha raabka.
2012-03-05 Bandhigu wuxuu soo jiitay in ka baddan 200 oo ah dadka aflaanta matala, sawir-qaadayaal; farshaxan, gabayo iyo masraxiyad.
Iddi Achieng: Muusiggu waa hab-nololeedka Afrika
2012-02-10 Sabahi ayaa fannaanadda reer Kenya iyo hawl-wadeenka bulsho Iddi Achieng ka waraysatay ra’yiga ay ka qabto muusigga Afrika iyo ol-olaynta